တိုယိုတာ မှ မော်ဒယ်သစ် Toyota Majesty ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း The Premium Class - YOYARLAY Digital Media and News
တိုယိုတာ မှ မော်ဒယ်သစ် Toyota Majesty ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း The Premium Class
Published: September 16, 20193:24 pm
Toyota Myanmar မှ TOYOTA MAJESTY ကားသစ်ကြီးကို ဂုဏ်ယူစွာ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ဒီပရီမီယံမော်တော်ယာဉ်ကတော့အားလုံးထက်သာလွန်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီး
ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ပရီမီယံအရည်အသွေးရှိခန့်ထည်မှုတစ်ရပ်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ဒီဇိုင်းအဖြစ်ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။Toyota Majesty မှာ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့အတွင်းခန်း ပါရှိပြီးCaptain Seats ၄ ခုံမှာ ယာဉ်စီးနင်းနေစဉ်အတွင်း သက်သောင့်သက်သာရှိမှုနဲ့အသုံးတည့်မှုတွေကို ခံစားရမှာပါ။
ကားအတွင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုအဆုံးစွန်ထိပေးစွမ်းနိုင်ရန်Semi Bonnetခေါင်းရှည်ကိုယ်ထည်ပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသစ်တီထွင်ထားတဲ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်တွေကလမ်းအခြေအနေအားလုံးရဲ့ မနှစ်မြို့ဖွယ်တုန်ခါမှု၊ ကြမ်းတမ်းမှုတွေကို လျော့ချပေးသွားမှာပါ။
၎င်း၏ ၂.၈ လီတာ GD အင်ဂျင်နဲ့ အရှိန်နှုန်း ၆ မျိုးပြောင်းလဲနိုင်သော အော်တိုထရန်စမစ်ရှင်းစနစ်က ညက်ညောတဲ့ အရှိန်သာွးနှုန်းနဲ့အတူ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းတဲ့ မောင်းနှင်မှုအရသာကို ရရှိစေဖို့ အာမခံပါတယ်။ Toyota Majesty တငွ် ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်တြွေဖစ်တဲ့ SRS လေအိတ် ၁၀ လုံးနဲ့ တိုယိုတာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အာရုံခံစနစ် (Toyota Safety Sense) တွေကို ထည့်သငွ်းပေးထားပါတယ်။ ထိုစနစ်မှာဆိုရင် ယာဉ်တိုက်မှုကို ကြိုတင်အာရုံခံစနစ်၊ အလိုအလျောက်မီးကြီးထိုးစနစ်၊ လမ်းကြောင်းသွေဖီသာွးပါက သတိပေးစနစ်နှင့် အရှိန်နှုန်းကို ရေဒါဖြင့်ထိန်းညှိပေးတဲ့စနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍအားလုံးမှာ ပြီးပြည့်စုံပြီး အဆင့်မြင့်လူနေမှုပုံစံအားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပရီမီယံမော်တော်ယာဉ်ကို ရှာဖွေနေသူတေအွတကွ်ကတော့ ဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တေကွအဆုံးသတ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်လာစေမှာပါ။ ဒီကားအမျိုးအစားရဲ့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဝယ်ယူသူအုပ်စုတေကွတော့ – ၁။ မျိုးဆက်သစ် မိသားစုများ ဒီခေါင်းစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့သူတေကွတော့ ကားကို တစ်ကိုယ်ရည်သုံးဖို့နဲ့ မိသားစုသုံးရန်အတကွ် ရည်ရွယ်ကြပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွင်းခန်း၊ သက်သောင့်သက်သာရှိမှု၊ ထိပ်တန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ ပေးရတ့ေဲဈးနှုန်းထက် သာလွန်တ့တဲန်ဖိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ကားတေကွို အဓိကထားကြည့်ရှုပါတယ်။
၂။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရာထူးမြင့်သူများ အဆိုပါ ဝယ်သူတွေကတော့ ကားကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတကွ် (ဒါမှမဟုတ်) ကားတစ်စီးရဲ့နေရာမှန်အတိုင်း အသုံးပြုချင်ကြပြီး၊ သူတို့က အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ ကားတစ်စီးကို ပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်။ Toyota Majesty ကားသစ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အရည်အသေးွအဆင့်အတန်းနဲ့ သူမတူတဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုတေကွို လက်တွေ့လာရောက်ခံစားကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Toyota Myanmarမှ ALL-NEW TOYOTA MAJESTY ကိုဂုဏ်ယူစွာ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အပြင်ပိုင်း အရောင် ၅ ရောင်နဲ့ အတွင်းခုံ ၂ ရောင်တို့မှ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Toyota Majesty ကို ကြိုတင်မှာယူမယ့်သူများအတကွ် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်မှစတင်၍ လက်ခံပေးနေပါပြီ။
Toyota Majesty အရောင်းပြပွဲ အကြောင်းအရာ Toyota Majesty အသစ်ကိုလေ့လာကြည့်ရှုဖို့အတွက် Toyota ရဲ့ တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးမှ အထူးစီစဉ်ပေးထားတဲ့ အရောင်းပြပွေဲတွကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့ မှ (၂၂)ရက်နေ့အထိ အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပသာွးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေရာ – တိုယိုတာမဂ ၤ လာ၊ Junction City (ရန်ကုန်) ၁၈ – ၂၀ စက်တင်ဘာ
– တိုယိုတာ Aye & Sons ၊ Junction Square (ရန်ကုန်) ၂၀ – ၂၂ စက်တင်ဘာ – တိုယိုတာ GW Lion Showroom (မန္တလေး) ၂၀ – ၂၁ စက်တင်ဘာ
Toyota Majesty “The Premium Class” အတကွ် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ပရီမီယံ အပြင်ပန်းပုံစံ 1. ကြီးမားသော ရေတိုင်ကီရှဲလ် 2. Semi Bonnet ခေါင်းရှည်ကိုယ်ထည်ပုံစံ
3. နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပါရှိသော အော်တိုဆွဲတံခါးများ
4. LED ရှေ့မီးကြီးများ
5. နေ့အချိန်တငွ်လင်းနေသော LED မီး
6. LED နှင်းမြူခွဲ ရှေ့မီးများ
7. ၁၇ လက်မရှိ အလိုွင်ဘီးများ
8. နောက်ဘက် ပေါင်းစပ် LED မီးများ
1. သစ်သားနှင့် သတ္တုတို့ဖြင့် အလှဆင်ထားသည့် ဘောင်ကကွ်များ
2. တစ်ယောက်ထိုင် သီးသန့်ခုံ ၄ ခုံပါသော ၁၀ ယောက်စီးကား
3. ပစ္စည်းထားရန်နေရာအဖြစ် ခေါက်ထားနိုင်သော ရှေ့အလယ်ခုံ
4. ခရီးဆောင်အိတ်များအတကွ် နေရာပိုရနိုင်ရန် ခေါက်ထားနိုင်သော နောက်ဆုံးအတန်းမှခုံများ
5. အလိုလျောက် လေအေးပေးစက် ၂ လုံး
6. သစ်သားဖြင့်အလှဆင်ထားသည့် ဘက်စုံသုံးနိုင်သော စတီယာရင်ဘီး
7. စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး၏လုပ်ဆောင်ချက်များကဲ့သို့သုံးနိုင်သော ၇ လက်မ အကျယ်ရှိသော ဖန်သားပြင်
အမြဲတမ်းအတကွ် သာလွန်ကောင်းမွန်သော မောင်းနှင်မှု 1. 2.8-Liter GD အင်ဂျင် – အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိနှုန်း: 115 KW / 3,600 rpm – အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်နှုန်း: 420 NM / 1,600-2,200 rpm 2. အော်တိုဂီယာ ၆ ချက် 3. MacPherson Strut ရှေ့ဆိုင်းထိန်း 4. Four-Link ကိုွင်စပရိန် နောက်ဆိုင်းထိန်း 5. အကျဉ်းဆုံး ချိုးကွေ့နိုင်စွမ်းအချင်းဝက် 5.5m (တာယာများ)
1. TOYOTA ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအာရုံခံစနစ်
a) ယာဉ်တိုက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်စနစ် (PCS*) အတကွ် မီလီလီတာရေဒါလှိုင်းများနှင့် အခြားယာဉ်များကို သတိပြုတွေ့ရှိနိုင်သော အထူးကင်မရာဆင်ဆာကို အသုံးပြုထား ပါတယ်။
b) လမ်းကြောင်းမှ သွေဖီခွဲထကွ်သွားမှုအချက်ပြခြင်း (LDA) က လက်ရှိမောင်းနှင်နေသော လမ်းကြောင်းမှ သွေဖီသာွးနိုင်ခြေကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး လမ်းကြောင်းသွေဖီသာွးနိုင်ခြေကို အသံအချက်ပေးစနစ်၊ သို့မဟုတ် စတီယာရင်ဘီးတုန်ခါမှုနှင့် မီတာခွက်တွင်ဖော်ပြ သတိပေးခြင်းတို့ဖြင့် ယာဉ်မောင်းသူထံသို့ သတိပေးပါတယ်။ c) အလိုလျောက် ရှေ့မီးကြီးပြောင်းလဲပေးခြင်းစနစ် (AHB) က ဆင်ဆာများဖြင့် ရှာဖွေ ရရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိယာဉ်များနှင့် လာနေသောယာဉ်များအပေါ်မူတည်၍ မီးအနိမ့်၊ အမြင့်ကို အလိုလျောက်ချိန်ညှိပေးခြင်း၊ ညဘက်တွင် မြင်နိုင်စွမ်းနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု တို့ကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ d) ဒိုင်နမစ်ရေဒါ ကားရှိန်နှုန်းထိန်း (DRCC) က ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ်အတငွ်းရှေ့ကားနှင့် စိတ်ချရတ့အဲကာွအဝေးကိုထိန်းပေးပြီး ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြန်နှုန်းအတိုင်း အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးသာွးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. ယာဉ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်စနစ် (VSC)
3. ဘရိတ်ဖမ်းရာတငွ် လော့ကျမသာွးစေသော စနစ် (ABS)
4. SRS လေအိတ် ၁၀ လုံး (ရှေ့အလယ်ခုံအတွက်ပါ ပါရှိ)
5. တောင်တက်အကူထိန်းချုပ်စနစ် (HAC)
6. လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူ နောက်ဘက်မော်နီတာ
Toyota Majesty ကားအသစ်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာပြည်မှဖောက်သည်တော်များ၏ စိတ်ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်မှုများ ဆထက်တပိုးတိုးပွားနိုင်စေရန် Toyota မှ ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်တာဝန်ယူကတိပြုပါသည်။ ယခုမော်ဒယ်အသစ်သည် ၃ နှစ်/ ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ (၎င်းမတိုင်မီ ဖြစ်ပွားသည့်အရာမှန်သမျှ) အာမခံပါရှိပါသည်။ ဤအာမခံမှုသည် Toyota ဟာ မိမိမော်တော်ယာဉ်၏
ထိပ်တန်းတည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးအပေါ်ယုံကြည်မှု၊ တရားဝင် Toyota ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးစစ်မှန်ကြောင်းအာမခံမှုနှင့် ဖောက်သည်တော်ကြီးများ၏အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းတို့ကို ထင်ဟပ်ပြသလျက်ရှိပါသည်။ဝယ်ယူသူများအားလုံး စိတ်အေးချမ်းသာယာစေရန်အတကွ် Toyota ၏ အရည်အသေးွမြင့်သော ရောင်းချပြီးနောက်ပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စစ်မှန်သောအပိုပစ္စည်းရရှိနိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်း အားထုတ်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အရစ်ကျပေးသွင်းဝယ်ယူခြင်းအစီအစဉ်များကို* Toyota ၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးထံတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
*စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ အတိုင်းသာ- ပိုမိုသိရှိလိုပါက တရားဝင် Toyota အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကို ဆက်သယွ်နိုင်ပါသည်။
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်: Toyota Aye and Sons လိပ်စာ – ၈၇(အေ)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင် စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် ၁၁၂၀၁၊ ရန်ကုန်မြို့ တယ်လီဖုန်း – (၀၁) ၄၀၀ ၉၅၀၊ (၀၁) ၅၀၂ ၂၀၆ ဝက်ဘ်ဆိုက် – http://toyota-ayeandsons.com
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်: Toyota Mingalar လိပ်စာ – အမှတ် ၆၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ (၂) ရပ်ကကွ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တယ်လီဖုန်း – (၀၁) ၅၁၄ ၉၄၀၊ (၀၁) ၅၁၄ ၉၄၁ ဝက်ဘ်ဆိုက် – http://www.mgmtoyota.com
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်: Toyota GW Lion လိပ်စာ – ဘလော့ ၊ ဦးပိုင်အမှတ် – ၁၀/၃၃၉၊ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်းမကြီး၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ အောင်ပင်လယ်ရပ်ကကွ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ တယ်လီဖုန်း – (၀၉) ၉၆၉ ၇၀၀ ၀၀၁၊ (၀၉) ၇၆၃ ၇၀၀ ၀၀၁ ဝက်ဘ်ဆိုက် – http://toyota.gw-lion.com/en
Previous Previous post: သွားဖုံးသွေးထွက်တာကို ဒီနည်းတွေနဲ့ ကုသကြမယ်
Next Next post: မျှဝေခံစားခြင်းအစ စာသင်ကျောင်းက
Published: August 5, 20198:10 pm Updated: August 6, 20199:29 am
Published: July 14, 20204:17 pm Updated: 4:44 pm